Rescuezilla 1.0.6: iyo Rescue Live vhezheni inouya nenhau | Linux Vakapindwa muropa
Iyo inonzi Swiss Army Knife, kana Swiss Army Knife yekudzosa kuti uchengetedze data rako rakachengeteka uye riine ruzha, yasvika neimwe yekuvandudza nyowani. Iyi ndiyo vhezheni Kununura 1.0.6, izvo zvinounza dzimwe dzinonakidza nhau uye inogadziridza mune ino Live vhezheni kuti iwe ugone kugadzirisa michina uchishandisa infinity yemapakeji ayo ayo yaanobatanidza. Uye kunyangwe ichiramba ichichengeta mweya weRadzo Kuchengeta uye Kudzoreredza uri mupenyu, ichokwadi zvakare kuti pane shanduko zvine chekuita nechimwe icho chinonakidza chirongwa.
Iyi isingaremi live inogona kutorwa mumaviri akasiyana edhisheni, imwe ndeye 64-bit uye imwe 32-bit. Muna 64 ine mabasa ekutsigira inozivikanwa UEFI / SecureBoot. Zvakare, Rescuezilla 1.0.6 64-bit Iyo yakavakirwa paUbuntu 20.04 LTS (Fcal Fossa), nezvose izvo zvinoreva. Pane kudaro, izvo zve32-bit Iyo ichiri yakavakirwa paUbuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver), sezvo iyo nyowani vhezheni yeCanonical yamira kutsigira 32-bit mune yayo yazvino vhezheni, sezvaunonyatso ziva ...
Imwe shanduko ndeyekuti GRUB ikozvino iri default bootloader, kutsiva ISOLINUX. Iyo zvakare ine package yekubatsira vashandisi kugadzirisa kuiswa neGRUB, rutsigiro rwekuwana EFI firmware marongero kubva kubhoot menyu, kugona kuisa iyo interface seDEB package, nezvimwe. Zvakare zvinosanganisirwa zvakawandisa zvigadziriso zvekugadzirisa zvimwe zvinhu zvanga zvichishayikwa mushanduro yapfuura.
Kana ari iwo mapakeji esoftware, iwo akagadziridzwa kune mamwe maazvino vhezheni mune akawanda kesi, uye mamwe akachinja Semuyenzaniso, Mozilla Firefox ikozvino ndiyo default browser panzvimbo yeChromium. Uye Mousepad ndiyo yakasarudzika mameseji edhita panzvimbo peLeafpad. Uye zvechokwadi, inouya nemamwe mapakeji kuita backup makopi uye kudzorera akaomarara madhiraivha, zvingaite sei neimwe nzira ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Rescuezilla 1.0.6: iyo Rescue Live vhezheni inosvika nenhau
Chrome is spyware yemunyori weWashington Post